१०२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो यी हुन् कम्पनी ! - jagritikhabar.com
१०२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो यी हुन् कम्पनी !
बुधबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से झिनो अंकमा हरियो रह्यो । १. ८२ अंकले बढेसँगै परिसूचक २७३४ अंकमा कायम भएको छ । कुल ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यसअघि मंगलबार ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएको थियो ।
१०२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो भने ७६ कम्पनीको घट्यो । ९ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो ।मैलुङखोला जलविद्युतको मूल्य सबैभन्दा धेरै ९.४ प्रतिशतले बढ्यो । कर्णाली विकास बैंक र पन्चकन्या माइ हाइड्रोको मूल्य ६ प्रतिशतले बढ्यो ।
बैंकिङ उपसमूह ७, जीवन बीमा ६१ र ब्यापार ३८ अंकले घटे । तिबाहेकका सबै उपसमूह बढेका छन् । विकास बैंक ४२, फाइनान्स ३५, होटल तथा पर्यटन २, जलविद्युत २३, उत्पादन २६, निर्जीवन बीमा ३६, अन्य ५ र माइक्रोफाइनान्स उपसमूह ३ अंकले बढे । धेरै रकमको कारोबार हुनेमा नेपाल टेलिकम अग्रस्थानमा रह्यो ।